Rajadii Arsenal ee horyaalka oo god dheer gashay & hadal heeynta taageerayaasha guul darada Swansea kadib | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Rajadii Arsenal ee horyaalka oo god dheer gashay & hadal heeynta taageerayaasha guul darada Swansea kadib
Arsenal waa Bess kuma guuleysanayso horyaalka Premier League xili ciyaareedkaan…12 dhibic ayey ka hooseydaa Hogaamiyaasha Chelsea…!!! Naga DAAAA.. Waa MADAX XANUUN tanoo kale!! ereyadaa iyo qaar kale ayaa laga maqlayey taageerayaasha Arsenal ee gudaha garoonka ku sugneyd markii uu seeriga dhamaadka si lama filaana u yeeray.
Difaac xumada kooxda heeysa ayaan soo muuuqanin kulankan keliya.waa la xusuustaa wixii dhacay Anderlech Champions league iyo kahorba,sidee loo sixi karaa kooxdan Odaygaan muxuu ku diiday inuu lacag ku bixiyo qeybta danbe..?
laakiin qaar inaga mida ayaa qaba indho adeyga ah in rajada Gunners’ ee Horyaalka iney qaadaan ay weli furan tahay,maadaama january ay soo dhowdahay!! Laakiin ma isweydiiseen ninku waa Wenger oo makula tahay inuu lacag badan dukaanka geyn karo..? MAYA waa Bakheyl… Bogaga xiriirka bulshada ayaa sidaa leys dhaafsanayey.
Xaqiiqdu waxaa ay tahay Arsene Wenger dagaal ha u galo keliya Koobka uusan waxba ka keenin ee uu iska dheelo ee Champions League, WAABA HADII UU HELO! waayo 4 koox ayaa u meteleysa England, 2 waa Chelsea iyo City oo isaga ka horeeya..HAYEH afar kale ayaa soo ordeysa waa Liverpool,Everton,Tottenham iyo Man U,maxaa dhacay maba uu ka horeeyo DHIBCO la sheego oo kaabigaa lagu hayaa aw san dheere!!
Kooxd ayaa dhowaan bishii May ka baxday abaartii mudo 9 sano oo koob la’aan ahayd markii FA Cup ku guuleysteen,sidoo kale lasoo iibiyey Alexis Sanchez iyo Danny Welbeck,oo adayga kuma fekerin difaac,isagoo Barcelona udiray difaacii wanaagsana,hadaba Wenger 27-kulan ayaa u harsan Ma inuu raadiyaa Booska afaraad si uu Champions league uga baaqsan? sideese lagu heli karaa kaalintaa hadii xaalku sidaan sii ahaado January kadib….?